Aya ndiwo mashanu emaReaders akanakisa aunogona kutenga | Gadget nhau
Aya ndiwo mashanu emaReaders akanakisa aunogona kutenga
Vazhinji vashandisi vari kunakidzwa nemabhuku mumadhijitari fomati nekuda kweReader kana bhuku remagetsi, vachibatsirwa nezvakawanda zvayakanakira. Uye zvakare, nerombo rakanaka nekufamba kwenguva, takaona kuti huwandu hukuru hwemidziyo huripo yekutengesa kusarudza kubva, kunyangwe protagonist huru yemusika uyu ichiri Amazon, ine akasiyana siyana maReaders akasarudzika kusarudza kubva. .
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga eReader, nhasi tiri kuzokupa ruoko kuti uzviite uye kunyanya kuti utore sarudzo yedhijitori chaipo. Kune izvi isu tichaenda kukuratidza mune ino chinyorwa 5 emaReaders akanakisa aunogona kutenga nhasi pamusika.
Sezvatakambotaura, Amazon ndiyo protagonist huru yemusika uyu, uye muenzaniso weiyi ndeyekuti mune ino runyorwa tichaona anosvika matatu maturiki kubva kukambani inotungamirwa naJeff Bezos. Pamwe taifanirwa kunge takagadzira nzvimbo yemamwe mabhurani, asi kana tichinyatsoda kutenga eReader yemhando yepamusoro inotipa mhedzisiro, hatigone kupotsa chero eemaAmazon.
3 Basic Kindle
4 Simba eReader Pro HD
Kana isu taifanira kugara neakanakisa eReader iyo iriko parizvino iri kutengeswa mumusika, nhamba hombe yenyanzvi uye zvakare vashandisi vaizogara neiyi Kindle Oasis. Amazon yanga ichinyatso kuvandudza zvishandiso zvayo, kudzamara yasvika iyi Kindle iyo mumaonero edu ane mwero inogumira pakukwana, kunyangwe mutengo wayo uri kunze kweizvo vazhinji vedu takagadzirira kubhadhara.
Izvozvi iri kutengeswa mumusika nemutengo we289.99 euros Izvo zvinogona kuratidzika kunge zvakakwirira, uye ndizvo, asi nekutenga kweA Kindle Oasis isu hatizongova neyakanaka mudziyo pamusika, asi isu zvakare tichava neReader inotigarisa uye ichatishandira kwemakore mazhinji kunakidzwa nedigital kuverenga.
Tevere, tinoongorora iyo hukuru maficha uye kutsanangurwa kweiyi Kindle Oasis;
Kobo ndomumwe wevatambi vakura mumusika wekuverenga wedhijitari uye wakakwanisa kukunda kutonga kweAmazon nekuvhurwa kwemidziyo inonakidza seiyi Kobo Aura HD H2O. Kuvhurwa kweReaders nyowani kwakaziviswa munguva pfupi, kunyangwe ichi chishandiso parizvino chiri bhenji mumusika.
Izvi ndizvo Kobo Aura HD H2O maficha akakosha uye maratidziro;
Zviyero: 175,7 x 128,3 x 11,7 mm
Ratidza: 6,8-inch WXGA + Pearl E Ink yekubata skrini ine 265 ppi, uye 1440 x 1080px resolution
Kurema: 240 gramu
Yemukati ndangariro: 4 GB inowedzerwa ne 32 GB Micro SD kadhi
Kubatana: WiFi uye Micro-USB
Bhatiri ine kuzvimiririra inosvika kumwedzi miviri
Mafomu akatsigirwa: eBooks: EPUB, PDF neMOBI
Yakabatanidzwa ComfortLight mwenje system ine yakasviba-yakatetepa uye isingagadzirike kupfeka
Mazhinji emaReaders akanakisa pamusika ane mutengo wakaringana, asi kune zvakare zvakanaka michina yakaita seiyi Basic Kindle, nemutengo wakadzikira. Tinogona kutaura nezve iyi Amazon Kindle kuti iri rakakwana bhuku remagetsi kune vese avo vashandisi vanoda zvakawandisa mabasa kwete sarudzo, uye vanongoda kunakidzwa nekuverenga.
Nekuvandudzwa kwazvino kweiyi yakakosha Kindle, Amazon yakapa iyo ine hukuru simba uye nyowani mashandiro, ayo ita kuti ive yakakwana pamutengo wainayo, parizvino yakaiswa pa79,99 euros. Rangarira usati watonga bhuku remagetsi iri nemutengo waro uye usabvunze mwenje kana mashandiro emidziyo akakosha zvakapetwa.
Tevere isu tichaongorora iyo akakosha maficha uye kudomwa kweiyi yakakosha Kindle;
Zviyero: 169 x 119 x 10,2 mm
Kurema: 191 gramu
6 ″ (15,2 cm) Amazon inoratidzira neE Ink Pearl tekinoroji, 167 dpi, yakagadzirirwa font tekinoroji, uye 16 grey zviyero
Yemukati yekuchengetera: 4 GB iyo inobvumidza iwe kuti uchengete anopfuura ma2.000 eBooks, kunyangwe zvichizoenderana nesaizi yebhuku rega rega
Cloud chengetedzo: yemahara uye isina muganho weAmazon zvemukati
Mafomu akatsigirwa: Fomati 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, isina kuchengetedzwa MOBI, PRC natively; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP nekutendeuka
Simba eReader Pro HD
Iyo yeSpanish brand Energy Ssistem ine chiitiko chakakura mumusika wekuverenga wedhijitari. Kwemakore anga atanga huwandu hukuru hwemabhuku emagetsi amuunzira mamwe anodarika manhamba ekutengesa anonakidza. Iye zvino ivo vatangisa iyo Simba eReader Pro HD, mukutsvaga kubudirira uye pamusoro pezvose kumira kuma greats emusika,
Uye ivo vakakwanisa kugadzira uye kugadzira eReader ine simba rakakura uye zvinopfuura zvinonakidza maficha atinozoongorora pazasi chaipo:
Zviyero: 159 x 118 x 8 mm
Screen: anti-glare 6? E-inki Tsamba HD yemagetsi inki ine gumi nematanhatu e grey ine resolution ye16 x 758 pixels ane 1024 dpi
Yemukati ndangariro: 8 GB inokwidziridzwa inosvika ku128 GB kuburikidza nemakadhi e MicroSD / SDHC / SDXC
Kubatana: WI-FI 802.11 b / g / n
2.800 mAH bhatiri, kuzvimiririra kwemwedzi miviri
Mafomu akatsigirwa: ebook: txt, pdf, epub, fb2, html, rtf, chm uye mobi
Chekupedzisira uye kuvhara runyorwa urwu tichaenda kunongedzera zvakare kuchishandiso cheAmazon. Tiri kutaura nezvazvo Kindle Voyage, yekutanga eReader yekutanga yakatangwa pamusika nekambani inotungamirwa naJeff Bezos uye kuti zvichiteerana tinofanira kuzviisa zvishoma pamberi peMhando yeOasis yatakatotaura nezvayo.
Amazon yakachengeta iyi Kindle Voyage kune yekupedzisira ruzivo, ichiwana chinenge chakakwana chishandiso, kwete chete maererano nedesheni, asiwo mune sarudzo uye mashandiro ayo ayo anotipa isu. Mutengo waro wakadzokororazve chinhu chisina kunaka uye parizvino uri kutengeswa mumusika we189.99 euros. Ehezve, sezvatakakurukura neOasis, kudyara kwakakosha kunyangwe hazvo hunhu husingarambike uyezve nekuwana iyi Kindle tichava neReader kwenguva yakareba.
Tevere isu tichaongorora iyo Huru maficha uye kudomwa kweiyi Kindle Voyage;
Yakabatanidzwa mwenje uye yepamusoro screen musiyano uyo unotibvumidza isu kuverenga mune yakasununguka uye inonakidza nzira
Kutenga eReader munguva pfupi yadarika rave basa rakaomarara nekuti kune akawanda uye akawanda madhizaini aripo, eakafanana mhando uye mashandiro. Isu tichangobva kukuratidza kwedu kurudziro, asi isu tichiri kuzokupa mamwe matipi kuti iwe ugone kunyatso kana uchitenga yako inotevera e-bhuku uye usazofanira kuzvidemba nekutenga kwakaitwa.
Kana iwe uchizoshandisa yako eReader kuverenga zuva nezuva uye zvakanyanya kuenderera, rairo yedu ndeyekuti iwe ushandise mari yako pane chishandiso chemhando isina kukahadzika senge atakaona muchinyorwa chino. Nekudaro, kana iwe uchiziva kuti hausi kuzoishandisa zvakanyanya uye kuti uri kungoiverenga nenzira chaiyo, tinofanirwa kukurudzira kuti usashandise mari yakawandisa, kunyangwe sarudzo yekupedzisira ichifanira kuitwa newe.
Iwe unofanirwa zvakare kuve wakajeka kana chako chiri kuverenga kwemadhijitari kana uchiri mudiwa wemabhuku mune fomati yemapepa. Kune vazhinji vashandisi kuti mushure mekutenga eReader, ivo vanoona kuti kuverenga ma-eBook kana emadhijitari mabhuku hachisi chinhu chavo.
Iwe unofunga ndeapi maReaders akanakisa anogona kutengwa pamusika nhasi?. Tiudze maonero ako munzvimbo yakachengeterwa makomendi pane ino yekupinda kana kuburikidza nemagariro network matiri. Zvakare, kana iwe uchizotora eReader, tiudze kuti nei wasarudza iyo uye kunyanya zvikonzero zvakakonzera kuti usarudze iyo eReader, pamwe neiyi isu tinogona kusarudza futi nevamwe vaverengi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Aya ndiwo mashanu emaReaders akanakisa aunogona kutenga
Zvimwe zvekushandisa zvine njodzi zvakanyanya zvinoshandiswa neNSA zvinouya pachena
McDonald's inopa chiitiko chekuongorora pamwe neKudya Kwayo Kunofadza